January 7, 2021 - Online Hartha
သမီး လူထွက်တော့မယ် အဖေ နဲ့ အမေရယ် တဲ့😥😥😥
January 7, 2021 by Online Hartha
” လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ်… ကလင်.……… ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်…။ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်။ မွေးထားတဲ့သားသမီး ၃ ယောက်ထဲမှာ “သမီးသီလရှင်လေးကအကြီးဆုံး သားလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူတကွနေတာပေါ့သမီးလေးကို ၁၀ နှစ်အရွယ်တည်းက သီလရှင်ဝတ်ပေးခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းမှာဘုရားစာပါဠိတွေကိုသင်ယူစေခဲ့တယ်။သမီးလေးအဖေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်အလုပ်သွားလုပ်ပီး မိခင်တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်နေရတာကိုသနားလို့ထင်ပါတယ် သမီးကဒီနှစ်မှလူထွက်မယ် စကားကိုပြောတော့ ဒေါ်တင်မေခင်များမှာ ငိုရမလို ဖြစ်နေခဲ့တယ်။သမီးလေးကိုတော့ ချော့ပြောလိုက်တာဘဲရွာကိုအရောက်တော့ပြန်ခဲ့အုံးလို့ မှာလိုက်တာဘဲ ဘုရား ဘုရားသမီးလေး သီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးနှင့်ဘဲပြန်ခဲ့ပါစေဘုရား ဆိုပြီး ဘုရားရှေ့မှာဆုတောင်းနေပြီးလေ….။ရွက်ဟောင်းတွေကြွေ ရွက်သစ်တွေဝေချိန်မှာ ဒေါ်တင်မေထံ သမီးလေးသီလရှင်ပြန်လာမယ့်သတင်း ကြားတော့ ရွာလယ်ပိုင်းကသူဋ္ဌေးတစ်ဦးဆီမှာ ပိုက်ဆံ ၂ သိန်းလောက်သွားချေးပြီး သမီးလေးအတွက် SAMSUNG ဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ထားလိုက်တယ်။ သူ့စိတ်ကူးကတော့သမီးလေးကို ဒီဖုန်းလေးနှင့်ချော့ပြီးလူမထွက်အောင်တားမယ်ပေါ့…။ဟော…… သမီးလေးကရောက်လာပြီးအမေ……အမေ … Read more
“ကိုကြီးအိပ်နေတာ မနှိုးရဲဘူး”ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး
အရမ်းသဘောကျလို့ ကူးယူလာတာပါ။ တစ်ခါတုန်းက ကျနော့်မှာ သူ့အိမ်က ဒရိုင်ဘာကို အင်မတန်နိုင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ဒရိုင်ဘာက သူ့ထက် အသက်ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့က “ကို” တပ်ပြီး ခေါ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းကတော့ နာမည်ပဲခေါ်ပါတယ်လေ စကားပြောလည်း သူငယ်ချင်းက မင်းနဲ့ ငါပဲ ဒရိုင်ဘာအကိုကြီးကတော့ သူ့အလုပ်ရှင်ဆိုတော့ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရတာပေါ့လေ ဒီကောင်က ပြောစရာရှိလည်းပြော၊ ဆဲစရာရှိလည်းဆဲ သဘောကောင်းပေမယ့် အထက်စီးတော့ဆန်ပါတယ်. တခါတလေ ကိုယ်ကတောင် ကြားထဲကနေ ဝင်အားနာရတယ်.. ဒရိုင်ဘာအပေါ် သူပြောပုံဆိုပုံတွေက ရင့်သီးပါတယ်.. ဟိုကတော့ သည်းခံရှာပါတယ် အလုပ်ရှင်မလား…? ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ သူငယ်ချင်းက ဒေါကန်နေပါတယ် ဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တော့ သူ့ဒရိုင်ဘာ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ မလာလို့တဲ့ ဒါနဲ့ ဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီး အိမ်လိုက်သွားကြတယ်.. တွေ့လို့ကတော့ ဆဲဆိုပြီး ဟောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ … Read more
ကငျး ၊ပငျ့ကူကိုကျခွငျး၊ကိုယျ၊လကျကိုကျခဲခွငျး၊အသားကှကျ၍ ယားခွငျး၊ ရောငျခွငျးမြားအတှကျ
မြန်မာဆေးကျမ်းများအလိုအရနလင်ကျော်သည်အေး၏။အခိုးကိုပွင့်စေ၍အဆိပ်ကိုနိုင်သည် ။(ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ )အသားခေါက်၊အမြစ်ခေါက် ။ (၁) ကင်း၊ပင့်ကူကိုက်ခြင်း၊ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲခြင်း၊အသားကွက်၍ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများအတွက် နလင်ကျော်ကို (ဆားနှင့်) သွေး၍လိမ်းပါက အခိုးပွင့်၍သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ (၂) ဖျားနာခြင်း၊အညှော်မိခြင်း၊အနာဝင်ခြင်း၊ငန်းမန်းအားကြီးခြင်းအတွက် နလင်ကျော်ကို(သွေး၍ သောက်ခြင်း)၊ (လိမ်းပေးခြင်း) ဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါသည် ။ ၀မ်းချုပ်ပါက နလင်ကျော်သွေးရည်ကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်သောက်ပါ ။ (၃) ၀မ်းဖော၊ ၀မ်းရောင်၊ ရေငတ်ဝမ်းကျ ဖြစ်ပါက ထမင်းဆုပ် မီးဖုတ်စိမ်ရည်နှင့် နလင်ကျော် သွေးသောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။ (၄) ဆုံဆို့နာ၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး အဖျားရောဂါ၊ ပင်လယ်အူနာရောဂါ၊ အမျိုးသမီးများ တကျည်းကိုက်ရောဂါများအတွက် နလင်ကျော်ကို ရေနှင့်သွေး၍ သောက်ပါ ။ (၅) ကိုယ်လက်လေးလံခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကြောင့်သွားလာရာ၌ ဒူးဆစ်များ နာကျင်ခြင်း၊ ထိုင်ပါများလျှင်ကျင်ခြင်း၊ အမြင့်သို့တက်ရာ၌ မောပန်းခြင်းအတွက် … Read more
သငျ့မကျြနှာကိုဖွူဖှေးသနျ့စငျလာအောငျ အိမျမှာသုံးနကေအြရာတဈခုနဲ့ ပွောငျးလဲလို့ရတာသိပွီးပွီလား
မျက်နှာအသားအရေ ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ် နေလို့စိတ်ပူနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အညစ်အကြေးတွေ အကုန်ပြောင်စင်ပြီး ခဏအတွင်း ဖြူဖွေးလာမယ့် DIY homemade ပေါင်းတင်နည်းလေး ပြောပြပေးပါမယ်နော် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဥတစ်လုံး သံပုရာသီး တစ်လုံး Tissue လိပ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပထမဦးဆုံး ကြက်ဥ အကာနဲ့ အနှစ်ကို ခွဲထုတ်ပါမယ် အကာရည်ကိုပဲယူပြီး ခွက်ထဲည့်ပြီး မွှေပေးပါ ပြီးရင်သံပုရာ သီးကိုညစ်ပြီး မွှေထားတဲ့ ကြက်ဥအကာရည်နဲ့ ရောပြီး ပြန်မွှေပေးပါ မွှေထားတဲ့အနှစ်ရည်ကိုမျက်နှာပေါ်အနှံ သုပ်လိမ်းပေးပါပြီးရင် မျက်နှာပေါ်ကို Tissue ဖတ်နဲ့အပြည့်ကပ်ပေးပြီး ၁၅မိနစ်ခန့် လောက်ခြောက်အောင် ထားထားပေးပါ ခြောက်ရင်ညှင်သာစွာ ဖြေးဖြေးလေး ခွာပေးပါဒါဆိုရင်တော့ အညစ်ကြေးကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီနော်။ #Credit Unicode Version မကျြနှာအသားအရေ ညဈညဈကွီးဖွဈ နလေို့စိတျပူနတေဲ့ ပြိုမတေို့အတှကျ … Read more
(၇)ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး 07.1.2021 မှ 13.1.2021 အထိ
07.1.2021 မှ 13.1.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်း ခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးဘဲ မိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချနိုင်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲ၍ အမှားတွေ့တတ်ပါသည်။ စနစ်တကျ စီမံထားသောကိစ္စများ တစ်ပါးသူ ကတိပျက်၍ အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်မည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စများ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စ များကို လိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်း ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့နေရတတ်သည်။လုပ်ငန်းရှင်များ မေတ္တာစိတ်နဲ့သဘောထားကြီးစွာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါ။ စပ်တူအလုပ်များငွေကြေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲနေရတတ်ပါ တယ်။ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ကြီးမား တဲ့ အပြောင်းအလဲများကို လဲ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သံယောဇဉ်မထားမိသူကိုထားမိခြင်းကြောင့် လူမှုရေးအရှုပ် အထွေး များ ဖြေရှင်း ရမည်။တွဲဖက်လုပ်သော သူများ ငွေကြေးစာရင်းဇယားများ အရှုပ်အထွေးပြုရာမှ ပြဿနာများ ဖြစ် ကာသူတစ်ပါး အလွဲသုံးစားပြုထား သောကိစ္စများကို ကိုယ်က စိုက်ထုတ်ပေးလျော်ရခြင်းများရှိမည်။ ပစ္စည်းများ ရောင်း မှား၊ ဝယ်မှားများ ဖြစ်တတ်သည်။ အနီးကပ်လူယုံ … Read more
စိမျးစားဥ မှပေးသော ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြားနှငျ့ တှဲမစားသငျ့သော ရှောငျရနျလေးမြား
စိမ်းစားဥ နဲ့ ကျန်းမာရေး ယခုလို ချမ်းအေးတဲ့ ဆောင်းရာသီ ရောက်ပြီဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါသာပေါ်လေ့ရှိသည့် ရာသီစာ စိမ်းစားဥလေးတွေကိုစားသုံးနိုင်ပြီ။ အဖြူရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နွယ်ဝင် စိမ်းစားဥတို့သည် အာလူးမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ကြသော်လည်း. သူရဲ့ ကြီးထွားမူပုံစံသည် ပဲပင်နဲ့တူသောကြောင့်အချို့အရပ်ဒေသ များတွင် ” ပဲစိမ်းစားဥ”လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံအပြားတွင် ပေါက်လျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ထွက်စိမ်းစားဥသည် အရွယ်အစားပိုကြီးကာ အရည်လည်းရွှမ်းလှပါသည်။ သဘာဝအရသာ ချိုချိုလေးမို့ အခွံနွှာ၍ သူ့ချည်းပဲ သရေစာအဖြစ်စားကြသလို ပါးပါးလှီးကာ အစိမ်းကြော် ကြော်စား လေ့ရှိကြပါသည်။ USDA ၏ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မူအရ ၁၀၀ ဂရမ်ရှိသော စိမ်းစားဥထဲတွင် ရေဓာတ် ၃၈ ကယ်လိုစီ , ကစီ ဓာတ် ၈ ဒသမ ၈၂ ဂရမ် , ပရိုတင်း ၀. … Read more
လေဖြတ်လို့ အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသူများကိုတွေ့ရင် ဒါလေးပြောပြပေးပါ
လေဖြတ်လို့ အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသူများကို ပြောပေးဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်လောက်က နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ပြီးဖတ်တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာက ဗဟုသုတ မှတ်သားဖွယ်ရာတွေ အကိုးကားနဲ့ ပါလေ့ရှိတယ်။ မှတ်ထားမိတာလေး ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း သောက်သုံးဖူးတယ်။ အရသာကတော့ တော်တော် ခါးပါတယ်။ လိပ်စာ အတိကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မုံရွာနယ်က ကျေးရွာတစ်ရွာက တောကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဆေးနည်လေးပါ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မုံရွာ-မန္တလေး ကားမောင်းသမား တစ်ယောက်ဟာ နိစ္စဓူဝ ကားမောင်းရတဲ့ အဖြစ်ကနေ ကိုယ်တစ်ခြမ်း သေပြီး လေဖြတ်တယ်ဆိုပါတော့။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ပေါင်းများစွာ ဆေးကုပေါ့။ သို့သော်လည်း အကောင်းတိုင်း ပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်နား ဆိုသလို ထိုဘုန်းတော်ကြီးရှိတဲ့ … Read more
ရိုးသားပွီး သဒ်ဒါတရားကောငျးကွတဲ့ မွနျမာတှေ သတိထားဖို့ပွောပါရစေ
မြန်မာ့ စိတ်ရင်းဆိုတာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်အရင်းခံလေးပါ။ ကမ္ဘာမှာတောင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အလှူအတန်း အလုပ်ဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းတပါးသားတွေကိုလည်း အခွင့်အရေးပိုမိုပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူထက် ဧည့်သည်ကို ပိုမို ဂရုစိုက်တတ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အမူအကျင့်လေးပါပဲ။ ဒီလို ရိုးသား တဲ့ စိတ်ဓါတ်အခံလေးကို အခွင့်ကောင်းယူတဲ့ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေက လိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်လာတာ တော်တော်လေးပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ ယခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ မန္တလေး ဈေးချိုအလယ်မှာ ဥရောပလူမျိုး တစ်ဦးက ပိုက်ဆံထိုင်တောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဥရောပသားတွေဟာ အာရှမှာတောင်းစားနေတာ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဗီယပ်နမ်မှာ မထူးဆန်းပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ထူးဆန်းပါတယ်။ ဒီလို ထူးဆန်းတာကြောင့် သနားတတ်တဲ့ စိတ်အခံရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဝိုင်းဝန်းပေးကမ်းကြပါတယ်။ ဒီလိုပေးတာဟာ … Read more
လမျးဘေးမီးတိုငျအောကျမှာ စာလုပျနတေဲ့ ကလေးကို အိမျတဈလုံးဆောကျပွီး လှူဒါနျးလိုကျတဲ့ သူဌေး
“ လမ်းဘေးမီးတိုင်အောက်မှာ စာလုပ်နေတဲ့ ကလေးကို အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သူဌေး ” လမ်းဘေးမီးတိုင်အောက်မှာ စာလုပ်နေတဲ့ ကလေးကို အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သူဌေး မကြာသေးခင်ကာလက လမ်းဘေးမီးတိုင်အောက်မှာ စာလုပ်နေတဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စာလုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးဟာ ပီရူးနိုင်ငံက အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် Victor Martin Angulo Cordoba ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Victor ရဲ့ လမ်းဘေးမှာ စိတ်ပါလက်ပါ စာလုပ်နေတဲ့ ပုံဟာ ပီရူးနိုင်ငံတစ်ခုတင်မကဘဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးလိုလို ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ ဘာရိန်းနိုင်ငံမှာရှိ အသက် ၃၁နှစ်အရွယ် Yaqoob Yusuf Ahmed ဆိုတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးစီပါ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Yaqoob ဟာ Victor လေးရဲ့ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကူညီဖို့ … Read more
တောင်တန်း သာသနာပြုဆရာတော်ကြီး​ ဦးဥတ္တမသာရ မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်အမြစ်ပြတ်ဆေး
ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိသူများအတွက် တစ်သက်လုံးပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းကောင်းပေးလိုက်မည်၊ မိတ္ထိလာမြို့မှ အဘိုးကြီးတစ်ဦး နှစ်နှစ်ကြာကြာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နေခဲ့ရာလူပြောများ၍ ပဲစဉ်းငုံ အလုံးလိုက် တစ်နေ့နို့ဆီဘူး တစ်လုံးကျ ပြုတ်၍ ဆားခတ်ပြီး အစမ်းသဘောဖြင့်နေ့စဉ်စားနေခဲ့သည်၊ စားနေရင်း နေရထိုင်ရတာ သက်သာလာပုံ ခံစားရသည် ဆို၏၊ ထို့ကြောင့် အားတက်၍နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆက်စားနေခဲ့ရာ ၃- လကြာလျင် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပုံလက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း ရောဂါပျောက်သူ၏ တူ ကျောင်းဆရာကြီး ဦးတင်ဝင်းက လျောက်ထားသည်။စားသုံးနည်းမှာ လွယ်ပါ၏၊ ပဲစဉ်းငုံအလုံးလိုက် ရေနှင့်နပ်အောင် ပြုတ်ပြီးဆားခပ်၍ ပဲလုံးဟင်းကဲ့သို့ အရေအဖတ် စားခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် နို့ဆီဗူး တစ်လုံးကျစားနေပါ၊ ၄-လ ကြာလျင် ပန်းနာရင်ကြပ် လုံးဝပျောက်ကင်း၏ ဟု မှတ်ပါ၊ အခြား ဘာစားဆေးမှ ထိုးရန်စားရန် မလိုကြောင်း သိရသည်။ နောက်တနည်း နတ်ဆေးဂမုန်းလက်တွေ့ဆေးကောင်းတစ်ခုကို … Read more